कफीको आयात २९ प्रतिशतले घटयो | गृहपृष्ठ
Home समाचार कफीको आयात २९ प्रतिशतले घटयो
कफीको आयात २९ प्रतिशतले घटयो
कात्तिक ३०, काठमाडौँ । नेपालबाट आर्थिक वर्ष०६५/६६ को तुलनामा आव ०६६/६७ मा कफी निर्यात ७ प्रतिशतले बढेको छ । आव ०६५/६६ मा १ सय १२ टन कफी निर्यात भएकोमा आव ०६६/६७ मा निर्यातमा वृद्धि भै १ सय २० टन पुगेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्डका कार्यकारी निर्देश क विनयकुमार मिश्रले जानकारी दिए । राष्ट्रिय कफी दिवसका अवसरमा वोर्डद्वारा मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिश्रले सो जानकारी दिएका हुन् । हाल नेपालबाट कफी (ग्रीन वीन) जापान, अमेरिका, जर्मनी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देशहरूमा निर्यात भइरहेको छ । २०४० सालमा रूपन्देहीको मणिग्राममा नेपालको पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कफीको विक्री वितरण शुरू भएको हो ।
यसैगरी आव ०६५/६६ को तुलनामा आव ०६६/६७ मा कफीको आयात २९ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ । सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार आव ०६५/६६ मा रू. ८४ हजार ४ सयको कफी आयात भएकोमा आव ०६६/६७ मा रू. ५९ हजार ४ सय ५० को कफी मात्र आयात भएको थियो । नेपालमा इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, चीन, मलेशियालगायतका देशबाट कफी आयात हुने गरेको छ । नेपालमा आव ०६५/६६ को तुलनामा आव ०६६/६७ मा कफीको उत्पादन पनि बढेको छ । अघिल्लो आवमा ३ सय ३४ टन कफी उत्पादन भएकोमा गत आवमा वृद्धि भई ४ सय २९ दशमलव ५ टन उत्पादन भएको बताइएको छ । नेपालमा २५ हजारभन्दा बढी किसानले करीब १ हजार ६ सय ३० हेक्टर जमिनमा कफी खेती गरिरहेका छन् ।
सोही कार्यक्रममा हाइल्याण्ड कफी प्रमोशन कम्पनीका निर्देशक भुवनेश्वर पंगेनीले नेपालमा अराबीका जातको कफी मात्र उत्पादन हुँदै आएको बताए । यस जातको कफी सामान्यतया ८ सयदेखि १ हजार ६ सय मिटरको उचाइँमा राम्रो उत्पादन हुने जानकारी पनि उनले दिए । कार्यक्रममा नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले नेपालमा उत्पादित कफी पूर्णरूपमा अर्ग्यानिक भएको दाबी गरे । उनले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा उत्पादित कफीको प्रमाणीकरण प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिँदै नेपाली कफी गुणस्तरीय भए पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा यसको प्रवर्द्धन भने हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सम्मेलनमा चालू आवका लागि बोर्डले कफीको न्यूनतम सहमत मूल्य निर्धारण गरेको पनि बताइयो । सो अनुसार पार्चमेण्ट कफी प्रतिकेजी मूल्य रू. १ सय ५० र सुख्खा चेरी कफी प्रतिकेजी मूल्य रू. ३० रहेको छ । यो मूल्य मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुने छ । गत वर्ष पार्चमेण्ट कफीको प्रतिकेजी मूल्य रू. १ सय ४२ र सुख्खा चेरी कफीको प्रतिकेजी मूल्य रू.२७ रहेको थियो । बोर्डले तीन वर्षदेखि उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको कफीको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क ‘लोगो’ लाई विभागले सोमवार स्वीकृति दिएको पनि बताएको छ । बोर्डका अनुसार सो ट्रेडमार्क मङ्सिर १ गतेबाट लागु हुने छ । कफीको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि बोर्डले त्रिवर्षीय ‘राष्ट्रिय कफी नीति कार्यान्वयन निर्देशिका २०६६’ पनि लागु गरेको छ ।
सुन्तलाबोटमा ग्रिनिङ भाइरसको प्रकोप
कात्तिक ३०, तनहुँ । आफ्नो बगैंचाका सुन्तलाका बोटहरू धमाधम मर्न थालेपछि तनहुँका सुन्तला कृषक समस्यामा परेका छन् । सुन्तला उत्पादनका दृष्टिले उपयुक्त मानिएका जिल्लाका बन्दीपुर, बरादी, जामुने, वैदी, बेनिकोटलगायतका स्थानका सुन्तलाका बोटहरू ग्रिनिङ भाइरस रोगका कारण वर्षेनि सुक्दै जान थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तनहुँका वरिष्ठ वागबानी अधिकृत डोलकृष्ण सुवेदीले अभियानलाई बताए । सुन्तला तनहुँ जिल्लामा उत्पादन हुने प्रमुख फल हो । सुवेदीले भने, ‘यही क्रम रही रहे आगामी १० वर्षmaaतनहुँमा सुन्तला खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले रोगविरुद्ध लड्न स्रोत र साधनको कमी भए पनि किसानलाई रोगविरुद्ध चेतना फैलाउने काम भइरहेको र मरेको सुन्तलाको ठाउँमा नयाँ बेर्ना दिइरहेको जानकारी दिएको छ । तर, सुन्तलाखेतीलाई जोगाउन यति मात्र पर्याप्त नभएको अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ । एकपटक ग्रिनिङ भाइरस लागेपछि बगैँचामा रहेका अन्य बोटमा पनि क्रमशः त्यसको सङ्क्रमण र्सने विज्ञहरू बताउँछन् । बन्दीपुरका सुन्तला बगैँचा ग्रिनिङकै सङ्क्रमणका कारण सखाप भइसकेको बुझिएको छ । ग्रिनिङ भाइरसले एकपटक आक्रमण गरिसकेपछि बोट विस्तारै सुक्दै जाने गर्छ । यस रोगको कुनै उपचार अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
बागबानी अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारका डा. धवु्र भट्टराईका अनुसार तनहुबाहेक लमजुङ , कास्की र स्याङजामा पनि सुन्तलाको बोट मर्ने समस्या चर्को रूपमा छ । उनले अहिले आफूहरू यस समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । विशेष गरी ८ सय मिटरभन्दा होचो स्थानका सुन्तलाका बोटमा यस्तो समस्या बढी देखिएको बताइएको छ । भट्टराईले लमजुङको ८ सय मिटर होचो स्थानमा रहेका ८० प्रतिशत सुन्तलाका बोटमा यस्तो समस्या देखिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस सङ्क्रमणको उपचार नभएकोले बोट उखाल्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर सङ्क्रमित बोटले पनि केही वर्षउत्पादन दिने भएकाले मलजल गरेर उत्पादन लिन भने सकिन्छ ।’
सुन्तलाखेतीका लागि गोरखाबाट बन्दीपुर छाप आएका सुन्तला कृषक राममणि धितालले आफ्नो १६ रोपनी जग्गामा लगाएको सुन्तलाका बोटमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी मरिसकेको बताए । उनका अनुसार सो स्थानमा मात्र सुन्तलाका १ हजारभन्दा बढी बोट मरिसकेका छन् । उपचार नहुने र भएका बोटमा समेत भाइरसको सङ्क्रमण हुने डरले कृषकले रोग लागेका बोटहरू उखेलेर फाल्ने गरेको उनले बताए । बन्दीपुर गुर्जुमका कृषक वृद्धिबहादुर उपरकोटीले आफूले लगाएको १ सय ५० बोटमध्ये २५ बोट मरिसकेको बताउँदै भने, ‘एउटा बोटबाट रू. २५ सयदेखि ३ हजार आम्दानी गर्थे, अहिले बोट मरेका कारण आम्दानी निकै घटेको छ ।’ अर्का सुन्तला कृषक टकबहादुर उपरकोटीले लगाएको सुन्तलाका ७० बोटमध्ये २० वटा मरिसकेका छन् । उनले हरेक वर्ष ४/५ वटा बोट मरेर नष्ट हुन थालेपछि सुन्तलाकै भरमा गुजारा गर्ने आफ्नो परिवारलाई गाह्रो भएको दुःखेसो पोखे । बन्दीपुर बजारका चक्रबहादुर रोकाको त २ सयवटै बोट सुकेर मरेपछि सुन्तलाको बगैंचा नै सखाप भएको छ । उनले भने, ‘वर्षको ८० हजार रुपैयाँसम्मको सुन्तला बेच्ने गरेको थिएँ, अहिले त सुन्तला चाख्नसमेत पाइएन ।’
भटमासको तेल आयात
नेपालमा भटमासको तेलको लागि प्रयोग हुने कच्चापदार्थको आयात वर्षोनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न ब्राण्डमा प्रशोधन गर्ने तेल उद्योगहरू धमाधम खुलेका र तेलको लागि कच्चापदार्थ नेपालमा नपुग भएकोले नै वार्षिक अर्बौंको भटमासको तेल बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र प्रशोधित तेल आयात गर्नुपरेको हो । नेपालमा ल्याइने तयारी भटमासको तेल मलेशियाबाट बढी मात्रामा आउँछ । त्यसपछि भारत, सिङ्गापुर बेल्जियमबाट आउने गरेको छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थका रूपमा नेपालमा प्रशोधन गर्न ल्याउनेमा सब भन्दा बढी कच्चा पदार्थ अर्जेण्टिनाबाट आउने र त्यसबाहेक मलेशिया, एण्टिगा बर्बुडा, सिङ्गापुर, भारतलगायतका देशबाट आउने गरेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०६५/०६६ मा ७ अर्ब ४८ करोडको कच्चा पदार्थ आयात गरेकोमा ६ अर्ब १७ करोडको ७४३६० मे. टन भटमासको तेलको लागि अर्जेण्टिनाबाट कच्चापदार्थ आयात भएको आधारमा भटमासको तेलको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको स्रोत अर्जेण्टिना बनेको हो ।
यसैगरी उक्त आवमा प्रशोधित भटमासको तेल २११४ टन मलेशियाबाट आएको र त्यसपछि भारत र सिङ्गापुरबाट आउने गरेको पाइएको छ । नेपालमा आयात हुने कच्चा पदार्थ र तेलको भन्सार मूल्य आव २०५८/०५९ मा एक अर्ब २१ करोड भएकोमा २०६५/०६६ मा यो बढेर ७ अर्ब ४८ करोड पुगेकोछ । विगत तीनवर्षमा विदेशिएको रकम हेर्दा भटमासको तेलका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ र तेल मात्रै अर्बौको आयात गर्नु परेकोले नेपालको कृषि उपजमा समेत बढ्दो परिनिर्भरता भएको स्वयम् तथ्याङ्क साक्षी छ । नेपालका सबै ठाउँमा भटमासको खेती हुने भए पनि व्यावसायिक रूपमा गरिएको पाइँदैन । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा २३ हजार ४ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रमा लगाइएको भटमासको उत्पादन २१ हजार ४ सय ५६ मे. टन भएको छ । जबकि उक्त आव २०६५/०६६ मा ८७ हजार ८ सय ५३ मे. टन कच्चा पदार्थ र २ हजार १ सय १४ मे. टन प्रशोधित तेल आयात गरिएको थियो । नेपालमा आयातित कच्चापदार्थ नेपालको कुल उत्पादनको चरगुणा भन्दा बढी भएकोले लाभ-लागतको हिसाब गरी योजना बनाउन तथ्याङ्कले सल्लाह दिन्छ ।
भटमासको तेलको लागि आयातित कच्चा पदार्थ र प्रशोधित तेल
आव आयात रू. हजारमा कच्चा पदार्थको हिस्सा (%)
२०५८/५९ १,२१,७०६४ ९४
२०६३/६४ ३,८८,८००५ ८२
२०६४/६५ ४,६१,०५१८ ९०
२०६५/६६ ७,४८,९३७८ ९८
धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान
कात्तिक ३०, मकवानपुर (अस) । मकवानपुर जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन वृद्धि हुने देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्षधानखेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्नुका साथै समयमै पानी परेको र रोगव्याधि नलागेका कारण धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मकवानपुरले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा यस वर्ष१३ हजार ६ सय ८१ हेक्टर जग्गामा धान लगाइएको सो कार्यालयका योजना अधिकृत वासुदेव शर्माले बताए । गत वर्ष ११ हजार १ सय १० हेक्टर जग्गामा धानखेती गरिएको थियो । शर्माका अनुसार यस वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव २ मेटि्रक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३ दशमलव १५ मेटि्रक टन धान उत्पादन भएको थियो । मकवानपुरका मनहरी, हटिया, छतिवन, राइगाउँ, नामटारलगायतका गाविसमा धानबाली राम्रो हुने गरेको छ । जिल्लामा ‘मकवानपुर-१’ नामक धानको बीउसमेत उत्पादन हुने गरेको सो कार्यालयले बताएको छ ।
कात्तिक ३०, भैरहवा । लुम्बिनी अञ्चलका रूपन्देही, नवलपरासी लगायत चितवन, मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लामा छरुवा धानखेती प्रविधि निकै लोक प्रिय हुँदै आएको छ । खाद्यान्न बालीमा आधारित बाली प्रणालीमा स्रोत संरक्षण प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले यो प्रविधि शुरू गरिएको बाली विशेषज्ञ डा.अनन्तप्रसाद रेग्मीले बताए ।
सेरल सिष्टम इनिसियटिभ फर साउथ एशिया ‘सिसा’ नामक प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो प्रविधि नेपाल भित्रिएको हो । यसले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । डा. रेग्मीका अनुसार यस प्रविधिबाट अहिले नेपालमा करीब २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको छ । उनले सोही देखासिकीमा किसानहरूले अन्य केही क्षेत्रमा यस्तो प्रविधि अपनाएको पनि बताए । धान रोपाइँ गर्दा समय र पैसा दुवै बढी लाग्ने तथा श्रमिक नपाउने समस्या पनि हुने गरेको स्थितिमा यो प्रविधि निकै उपयोगी रहेको छ । यस प्रविधिको प्रयोगबाट प्रति बिघा करीब रू. १० हजार लगानी कम हुने पनि रेग्मीले जानकारी दिए । यस प्रविधि अन्तर्गत धानको ब्याड राख्ने समयमा खनजोत गरी तयार पारेको जमीनमा विशेष प्रकारको मेशिनबाट धान र्छने गरिन्छ ।
कात्तिक ३०, सुर्खेत । सोचेजस्तै आम्दानी हुन थालेपछि सुर्खेतका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा बदामखेती गर्न थालेका छन् । यसपटक जिल्लाको ५६ दशमलव ५ हेक्टर जग्गामा बदामखेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुर्खेतका निमित्त प्रमुख कमलकेशर खनालले बताए । जिल्लाका तातापानी, घाटगाउँ, बाबियाचौर, कुनाथरी, विद्यापुर, रामघाट, मैन्तडा, सहारे, बजेडीचौरलगायतका गाविसमा अहिले बदामखेती भइरहेको छ । अन्य बाली नहुने ठाउँमा राम्रो उत्पादन हुने, थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन हुने र माग पनि बढेका कारण किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा बदामखेती हुरू गरेका हुन् । निमित्त प्रमुख खनालले भने, ‘अरू बाली फस्टाउन नसकेका क्षेत्रहरूमा समेत किसानहरूले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नका लागि बदाम खेती नै गर्न थालेका छन् ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार सुर्खेत जिल्ला बदामखेतीका लागि अत्यन्त उपयुक्त छ । जिल्लाका एक कृषकले अहिले ५० देखि ६० क्विण्टलसम्म बदाम उत्पादन गरिरहेको पनि सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सुर्खेतमा वार्षिक ८४ मेट्रिक टन बदाम उत्पादन हुँदै आएको छ । नगदेबालीका रूपमा लिइने बदाम स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ ।